I-Ashwagandha, isitshalo sokuba namandla ehhashi - i-Afrikhepri Fondation
I-Ashwagandha, isitshalo sokuba namandla ehhashi
Thei-ashwagandha isitshalo esinomsoco esomndeni wakwaSolanaceae. I-Ashwagandha ingenye yama-adaptogens ahlonishwa kakhulu futhi asetshenziswa kakhulu emithini ye-Ayurvedic. AbakwaBotanists bakubiza nge- "Withania somnifera", siyazi ngamagama ajwayelekile, afana ne: Indian ginseng, ashwagandha, Sogade-Beru, icherry yasebusika, Asana, Pevette, Ashgandh. Kwezokwelapha amakhambi sisebenzisa izimpande ze-Ashwagandha, emithini ye-Ayurvedic sivame ukusebenzisa amaqabunga.
I-1 °) i-Etymology
NgesiSanskrit, i-ashwagandha yenziwa izingxenye ezimbili: “i-Ashwa” isho ihhashi futhi i- “Gandha” isho amakha, yingakho igama layo lisho ukuthi “okunuka ihhashi” ngokubhekisele emandleni alo okunika “amandla ihhashi ". Igama lohlobo "somnifera", elivela esiLatini, lisho "ukulala ubuthongo".
2 °) Umlando
U-Andania somnifera uyisitshalo sokuqala sase-Iraq naseNyakatho Afrika. itholakala naseNdiya lapho isetshenziswe iminyaka engaphezulu kwe-3000. Ama-Arabhu asendulo asebenzisa izimpande zesitshalo njenge-tonic, i-aphrodisiac kanye nalezi zinsuku ezingenabusi (ukuzwa ukudakwa).
E-Pakistan, amaqabunga e-Andania aphemayo, futhi nawo akhiqiza inzwa yokudakwa. EYemen, izakhamuzi zisebenzisa futhi i-Andania izimpande njengezinyosi zemvelo.
Ithiye ingalungiswa njengendlela yokudambisa nokucindezeleka okuyizimpande zika-Andania. ukuhlafuna impande entsha yesitshalo kwanikeza umphumela we-tonic. E-India lesi sitshalo kubhekwa njengalingana nePanax Ginseng (i-Korean Ginseng yeqiniso).
I-3 °) Indawo yokuhlala
I-Ashwagandha itholakala ezindaweni ezinomile zaseNdiya nase-Afrika.
4 °) Incazelo ye-Botanical.
I-ashwagandha isitshalo esinokubonakala kwe-shrub encane nokulinganisa phakathi kwe-30 no-75 amasentimitha aphakeme, ingafinyelela kumitha we-1.5.
I-ashwagandha yisitshalo sonyaka esakhiwa yi:
amaqabunga afakwe oval
izimbali eziluhlaza noma eziphuzi
amajikijolo amancane om-orange-obomvu
5 °) Ukwakhiwa
I-Aswagandha inothile ensimbi, i-glycowithanolides (i-antioxidants), i-tannins, i-glucose, i-nitrate ye-potassium, i-alkaloids nama-fatty acids. I-flavonoids, lactones kanye ne-acetylstérylglucosides itholakale ekubunjweni kwayo.
I-alkaloids ye-aswagandha iyingqayizivele, i-somniferin, i-inanolides ne-anferine. Ama-inanolides kufanele aphendule ngokufuna imithi eminingi e-Ashwagandha. Zivuselela ukuvuselelwa kwamasosha omzimba omzimba ama-lymphocytes anjalo. Zivimbela ukuvuvukala futhi zithuthukise imemori. Kuthathwa ndawonye, ​​lezi zenzo zisekela idumela lendabuko lika-Ashwagandha njenge-tonic noma i-adaptogen.
I-6 °) Izindawo nezimfanelo
I-Ashwagandha inemiphumela engase ibe kokubili i-tonic neyokudambisa. Esetshenziselwa ukulinganisa okuphezulu, u-hypnotic. It has antistress imiphumela, noma adaptogenic, ngokuba khona acetylstérylglucosides eziqukethwe empandeni yayo.
Ikhuthaza umzimba ukumelana nokuhlukunyezwa futhi kuvuselele isimiso somzimba sokuzivikela. Ibuye ibe nezindawo zokulwa nezidakamizwa nokulwa nokuvuvukala.
I-Ashwagandha inesenzo esishukumisayo kwi-gland yegciwane ngokukhulisa ukukhiqizwa kwe-T4 ihomoni ye-thyroid.
Namuhla, u-ashwagandha unesithakazelo esikhulu sezokwelapha. Ngempela, kubonakala ngokwezinye izifundo eziqhubekayo ukuthi i-ashwagandha ingaba nezindawo zokunciphisa ukusabalala kwamangqamuzana e-carcinogenic.
7 °) Izinkomba zokwelapha
Khuphula ukuzivikela emikhuhlaneni nasezifweni
Ukwandisa ubukhulu, ukuzala komuntu kanye ne-libido
Silwe nokungabi namandla
Usizo lawula ushukela wegazi
I-8 °) Ukuphikisana
I-Ashwagandha iphikisana nabesifazane abakhulelwe nabalahlayo, kanye nezingane ezincane kanye ne-hyperthyroidism, ngenxa yesenzo sayo kwi-gland yegciwane. Noma kunjalo, lesi sitshalo sesisetshenziswa ngokuphepha isikhathi eside yizingane eNdiya ngisho nabesifazane abakhulelwe. Kanye kuthathwe ngemali encane njenge-tonic. Ngesikhathi sokudla, kwandisa ukugeleza kobisi lwebele.
10 °) isifo se-Alzheimer kanye ne-ginseng yamaNdiya
abacwaningi Indian bathole ukuthi Indian ginseng (ashwagandha) isitshalo esetshenziswa yendabuko imithi Ayurvedic, ungase ukudlala indima ebalulekile isu zokwelapha ngokumelene ne-Alzheimer. Eqinisweni, ngokusho izifundo esishicilelwe ekuqhubeni National Academy of Sciences, ezikhishwe zalesi sitshalo ukuvimbela, e amagundane, ukwakheka amyloid zingcwecwe ebuchosheni.
I-ASHWAGANDHA * 400 mg / 60 capsules * Ikalwe ngo-5% kuma-Withanolides * Amandla, ibhalansi engokomzwelo, ...
Okusha okungu-2 kusuka ku- € 21,00
I-Ashwagandha 1000 mg amaphilisi noma ama-capsules we-600 mg - umkhiqizo wemvelo we-premium omsulwa -...
Okusha okungu-1 kusuka ku- € 19,49
I-Ashwagandha Organic 100% - I-Premium KSM 66 ye-Ayurvedic Herb - 500mg Vegan Ashwanghanda Capsule -...
Okusha okungu-1 kusuka ku- € 18,99
Kugcine ukubuyekezwa ngoNovemba 25, 2020 10:56 PM
Ubuciko bokuqalisa - uGuy Kawasaki (Audio)